URamaphosa uthi azivalwe izinkambi zikaFaro ngephasika | Scrolla Izindaba
URamaphosa uthi azivalwe izinkambi zikaFaro ngephasika
Ngenkathi kwanda ukwesaba ukuthi iPhasika elizayo lizoholela egagasini lesithathu lokuthelelena nge-Covid-19, uMengameli uCyril Ramaphosa wethule inkulumo esizweni ngoLwesibili ebusuku.
Kepha esikhundleni soshintsho olubanzi emikhawulweni yomvalelo obelulindelwe abaningi, uMengameli umemezele owodwa nje: ukuphuzwa kotshwala esidlangalaleni kuvinjelwe ngempelasonto yePhasika.
Ngaphandle kwalokhu, alukho olunye ushintsho emikhawulweni olumenyezelwe, futhi izwe lizohlala lisezingeni lokuqala.
Uthe, “Ngenxa yendima edlalwa utshwala ekubhebhethekiseni ukuziphatha budlabha, sizobeka imigoqo ethile ngempelasonto yePhasika. Ngalokho nje, ukuthengiswa kotshwala obuphuzelwa esidlangalaleni kuzovinjelwa ngoLwesihlanu oluzayo, ngoMgqibelo, ngeSonto nangoMsombuluko. Ngalezo zinsuku ezine nje kuphela.
“Ukudayiswa ezitolo zokudlela, emashibhini nasezindaweni zokuphuza utshwala kuzovunyelwa, kodwa lokhu kuzoya ngezimo zamalayisense kanye nesikhathi esinqunyelwe, kuze kube ngu-11 ebusuku.”
Ukuhamba phakathi kwezifundazwe kusavunyelwe, futhi nesikhathi esinqunyelwe ukubuyela ekhaya kusukela phakathi kwamabili kuya ku-4 ekuseni asishintshi.
Amabhishi, amadamu nezindawo zomphakathi ezinjengamapaki zizohlala zivulekile, noma ngabe uhulumeni wayethathe isinqumo sokuwavala ngoKhisimusi ekuqaleni kwegagasi lesibili.
Mayelana nezeluleko ngezindatshana esizibhalile ungathumela i-imeyili ku-ti[email protected], bese sihlela ukuthi sizothintana kanjani